डब्ल्यूएचओले भन्यो, नयाँ भेरियन्टबारे अवगत छैन ! - नेपालबहस
डब्ल्यूएचओले भन्यो, नयाँ भेरियन्टबारे अवगत छैन !
| १३:५०:१३ मा प्रकाशित
२० जेठ, काठमाडाैं । विश्व स्वास्थ्य संगठन ‘डब्ल्यूएचओ’ले नेपालमा देखिएको नयाँ भेरियन्टबारे अवगत नभएको जनाएको छ । डब्ल्यूएचओले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत कोरोनाको कुनै पनि प्रजातिको नयाँ भेरियन्ट भेटिएकोबारे जानकारी नभएको बताएको हो ।
आज डब्ल्यूएचओको नेपालस्थित कार्यालयले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेको छ, ‘नेपालमा सार्स–कोभ–२ को नयाँ भेरियन्ट फेला परेको भन्नेकुरामा विश्वस्वास्थ्य संगठन अवगत छैन ।’
बेलायती सञ्चारमध्यम डेलीमेलले नेपालमा नयाँ भेरियन्ट भेटिएको दाबी गरेको थियो । तर डब्ल्यूएचओले त्यसको खण्डन गरेको छ । हाल नेपालमा अल्फा ‘बी.१.१.७’, डेल्टा ‘बी.१.६१७.२’ र कप्पा ‘बी.१.६१७.१’ भेरियन्ट देखिएको छ । तीन भेरियन्टमध्ये नेपालमा हाल सक्रिय रहेको भेरियन्ट डेल्टा ‘बी.१.६१७.२’ हो ।
यसैबीच, आजै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कालो ढुसी ‘म्यूकर माइकोसिस’को संक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ । कैलालीको बर्दगोरिया–६ का ६५ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो ।
यी हुन् माओवादी केन्द्रबाट निश्काशित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु ८ मिनेट पहिले
आज बजारमा कतिमा भइरहेको छ सुनको कारोबार ? १७ मिनेट पहिले
राइफल पड्किएर ड्युटीमै रहेका सेनाका जवान घाइते २५ मिनेट पहिले
रक्तचापको श्रेणी कसरी थाहा पाउने ? ३१ मिनेट पहिले
तुलसीपुर बजारमा छाडा छोडिएका चौपाय ३९ मिनेट पहिले
ईन्सुलीन लिदै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहाेस यी कुराहरू ३९ मिनेट पहिले
धिताेपत्र बोर्डको ‘एक्सन’ पछि बजारमा आएको पहिरो रोकिएन ४२ मिनेट पहिले
पहिरो पन्छाएर मर्मतका लागि श्रमदान गर्दै ४२ मिनेट पहिले
निर्माणाधीन आधुनिक बागलुङ बसपार्क ४८ मिनेट पहिले
पक्की पुल नभएपछि अस्थायी पुलबाट आवतजावत ५१ मिनेट पहिले
पशुपालनबाट आयआर्जन वृद्धि गराउन ‘एक घर एक पशु बीमा’ कार्यक्रम लागू ५६ मिनेट पहिले
काठमाडौं उपत्यकासहित देशका केही ठाउँमा यसरी खुल्यो माैसम ४ घण्टा पहिले
अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले अवितरित हकप्रद असार ९ गतेदेखि लिलामीमा ल्याउँदै ५ दिन पहिले
५० प्रतिशत अनुदानमा किसानलाई हाते ट्र्याक्टर वितरण २ हप्ता पहिले
फेवातालमा खुम्चिएको पर्यटन अब गाउँमा २ वर्ष पहिले
भारतमा कोरोनाविरूद्धको खोप लगाएका ३७ डाक्टरहरूमा संक्रमण २ महिना पहिले
विश्व तेल बजारलाई स्थिरता दिन पुटिन, ट्रम्प र राजा सल्मानबीच सहमति १ वर्ष पहिले
भैँसीपालन लोप हुँदै २ वर्ष पहिले